Ama-74% wabantu bomhlaba angadalulwa amaza okushisa abulalayo ngo-2100 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo esingahle senzeke ngonyaka wama-2100 lapho kungancishiswa ukungcola. Okuphuzi kumelela izinsuku eziyi-10 zokushisa okubulalayo, nezinsuku ezimnyama ezingama-365. Isithombe - Screenshot.
Amagagasi okushisa yizimo zezulu lokho izokhiqizwa kaningi nangaphezulu kuya phambili njengoba izinga lokushisa lomhlaba wonke liqhubeka nokukhuphuka. Okwamanje, ngubani omunye okhumbula okuncane okwenzeka ngo-2003, okwabulala abantu abangu-11.435 XNUMX eFrance kuphela, ngokusho kwedatha evela kwiNational Institute of Statistics.
Okwamanje, Abantu abangama-30% emhlabeni bavezwa ukushisa okungahle kube yingozi izinsuku ezingama-20 ngonyaka noma ngaphezulu. Uma kungancishiswa ukukhishwa komoya, ngonyaka ka-2100 leli phesenti lingaba ngama-74% ngokocwaningo olwenziwe e-University of Hawaii (Manoa, eU.SA) futhi lwashicilelwa kumagazini i-Nature Climate Change.
Ababhali bezocwaningo basebenzise izinhlobo ezintathu zezimo ezakhiwe yi-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ukwakha imephu exhumana lapho ungabona khona ubungozi. Ngamunye wabo waziwa ngokuthi yi-Representative Concentration Path noma i-CPR.
Ngakho-ke, siyabona ukuthi ukugcina ukungcola kusezingeni elifanayo nanamuhla (isimo se-RCP 2.6), ngo-2050 ezindaweni ezinjengePanama kuzoba khona Izinsuku eziyi-195 zokushisa okubulalayo unyaka; eBangkok (Thailand) izinsuku eziyi-173, naseCaracas (eVenezuela), izinsuku ezingama-55. Kepha uma kukhona ukwanda kokukhishwa (RCP 4.5), ngasekupheleni kwekhulu leminyaka ezindaweni ezinjengeMalaga kuzoba nezinsuku ezingama-56 zamaza okushisa angaba yingozi.
Okubuhlungu wukuthi yize amazwe ethatha izinyathelo ezidingekayo ukunciphisa ukungcoliswa kwemvelo abantu bazofa ngokushisa ngokweqile. Ukushisa okuthi, lapho kunomswakama ophezulu, umzimba awukwazi ukukhipha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ama-74% wabantu bomhlaba angadalulwa amaza okushisa abulalayo ngo-2100